Ugwu Ugwu Ukwuu - PetrPikora.com
Ugwu ala ahịhịa nke Krkonoše
ugwu (German Riesengebirge, Polish Karkonosze) bụ ọnụ ọgụgụ geomorphological na oke ugwu dị elu na Czech na Highlands. Ọ dị n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Bohemia (nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ dị n'akụkụ Liberec, nke dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Královéhradecký) na n'ebe ndịda nke akụkụ Polish nke Silesia. Ugwu kachasị elu n'ugwu Giant bụ Sněžka (1603 m). Dị ka akụkọ, ọ na-eche nche ugwu mmụọ echiche nke Krakonos. Ọ bụ otu n'ime ebe ugwu kachasị mma na Czech Republic.
Ugwu ugwu ugwu gụnyere taa ugwu O nwere kemgbe oge ochie a kọwaworo dị ka Sudetenland, nke bụ ma eleghị anya aha Celtic si (kasị asụgharịkarị ugwu boar) ma ọ bụ Balkan si (sụgharịrị dị ka Ewu Mountain). Ptolemy (banyere 85-165) eji maka taa Sudetenland aha Sudetayle (na ore Mountains) na Askiburgion (karịsịa Mountains, nke dị nso n'obodo Askiburgium imebisị, ikekwe ka Lusatian Mountains, gụnyere Giant Mountains). Dio Cassius na 3. na narị afọ na-eji aha maka vandal Askiburgion n'ugwu. Mgbe Ptolemaic map bịara Czech Republic Bohuslav Balbin na Pavel rock si n'elu eji ndọtị aha Sudetenland dum gbalaga (17. Century).
Ụdị Oké Osimiri Ukwu ahụ dị iche iche - ihe ndozi nke ndị dị na mbara igwe, ọganihu dị omimi n'oge gara aga, mmetụta nke ihu igwe oyi na mmetụ ọkụ na-esote na-eme ka e nwee ebe obibi dị iche iche na ichebe ụdị osisi na anụ ọhịa dị iche iche maka ọdịdị anyị. E nwere ụfọdụ ụdị nchịkwa 300 na site na 1200 ụdị osisi vascular na ọtụtụ okpukpu ndị ọzọ (dịka mosses, mucus, ferns, lichens). E nwere ọtụtụ ụdị ihe egwu na Krkonoše.
The National Park nke Krkonoše bụ ihe a na-ahụkarị nke ọma ugwu na usoro Krkonoše-Jeseník. Ebe kachasị elu nke ogige ahụ (nakwa Czech Republic) bụ Sněžka na 1603 mita n'elu elu igwe. A na-ekewa ya na ugwu Vrchlabi na ugwu Krkonoše na ndịda, na nnukwu ugwu dị n'akụkụ ugwu. Nke a bụ mmetụta nke ikpeazụ glaciation - creeks, creepers, moraines, tori, oké osimiri na ndị ọzọ na relics. N'ebe ọwụwa anyanwụ nke ogige gburugburu Albeřice e nwekwara karst phenomena - Albeřice quarries.
Di iche iche umu anumanu di iche iche na agbanye osisi ndi bara uru. Anụ anụmanụ malitere n'oge akpịrị afọ gara aga na oge dị mma (a na-akpọ Holocene). N'ebe dị elu, a na-anọchite anya ụmụ anụmanụ Eurosiberian, ugwu ndị na-eto eto na-eto eto na-arịwanye elu.
E nwere ọtụtụ ụdị nke invertebrates ndị bụ ice onwunwe -'s atụ. Ostnonohý wolf, pigtail ugwu ugwu ephemera, ebe Nebria Gyllenhal, dragonflies Somatochlora alpestris na Aeschna coerulea. The vertebrates bu Giant Mountains kwuru, umu ka edem edere Europe ugwu nnunnu ojii, Nightingale Bluethroat plover aja aja, redpoll na ebe nile òké vole bụ.
Giant Mountains maka jupụtara ejupụta umu nwere ike na-atụle ephemera Giant (Rhithrogena Corcontica) na abụọ subspecies aa n'ebe ọzọ ụmụ anụmanụ - urukurubụba huňatce žlutopásého (Torula quadriaria sudetica) na vřetenovku Giant eju (Cochlodina Dubiose Corcontica).
ihe ịrịba amaugwu ugwuugwuugwu